network ပေါ်မှာ ဖိုင်တွေပျောက်လို့ — MYSTERY ZILLION
network ပေါ်မှာ ဖိုင်တွေပျောက်လို့
MZ က အကိုတို့ရေ
ကျွန်တော့် network ထဲမှာ ဖိုင်တွေပျောက်လို့ကူညီကြပါအုံး။
စက်(၁)မှာ ဖိုင်တွေထည့်ထားတာ အခြားစက်တွေက ခေါ်ကြည့်ရင် အကုန်မတွေ့ရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဖိုင်တွေကရှိတယ်။ စက်(၁)မှာ သွားပြန်ကြည့်ရင် အကုန်ရှိတယ်။ တချို့စက်တွေကကြည့်ရင်လည်း တွေ့ရတယ်။ တွေ့တဲ့စက်ကတွေ့တယ် မတွေ့တဲ့စက်ကမတွေ့ဘူးဖြစ်နေလို့။
အင်း...ဟုတ်ကဲ့.... ဒါကတော့Permission ကိစ္စပါဘဲ ။ အဲဒီစက်က... Permission ဖိုင်တွေကို အပြည့် အ၀မပေးထားလို့ပါ .... အဲဒီစက်(1) permission မှာ ပြန်စစ်ကြည့်လိုက်ပါဥိး... Permission မှာ Everyone ကို Selected လုပ်ထားပြီး ... Full Control ကို Checkmark လုပ်ထား/ မထားကြည့်လိုက်ပါ ... Network Workgroup ကလူတွေအားလုံးကို မြင်စေချင်ရင်ပြောတာပါ ... ဒါမှမဟုတ် ... အဲဒီ ... Group ထဲမှာ ... ရှိတဲ့ ...ဘယ်စက်က.. ဘယ်ယူဇာကိုဖြင့် ... Readonly , ဘယ် User က တော့... Write and excute ဘာညာစသဖြင့်ပေါ့...ဗျာ ... သေချာ manage လုပ် ပေးရင်ရပါတယ် ... မခက်ပါဘူး ... နောက်တစ်ခုက .... Virus Update လေးတော့ပုံမှန်လုပ်ပေးပါ နော် ... အဲဒီသကောင့်သားတွေက ... နည်းနည်းဆို..နည်းနည်းမှကို...စိတ်မချရတာ ... တစ်ခါတစ် ခါ .. ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပါဘဲ ...တိုင်ကိုပတ်လို့... Network ကိုလေးပြီး မတက်တော့တာ ... Client တွေကလည်း .. တစ်လုံးမှကိုခေါ်လို့မရတော့ဘူး ... တော်တော်ကို ... တိုင်ပတ်ရပါတယ် ... နောက်မှ ...တစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြန်လုပ်...အဲဒီ ဗိုင်းရပ်(စ်)...Update လုပ်တာကအစ...ပါတာပေါ့...:D
အကုန်မတွေ့ရဘူးဆိုတော့ တချို့ကိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့။ hidden file ဖြစ်နေတာကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Permission ကြောင့်လဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Permission မှာ စစ်ရင် ၂ဆင့်တော့စစ်ရမယ်နော်။ Sharing tab ရော Security tab ပါ ၂ခုလုံးစစ်ရမယ်။ တစ်ခုခုနဲ့ငြိနေရင် လဲ ရမှာမဟုတ်ဘူး။
ကျွန်တော်ဖြစ်နေတာကတော့ ဗျာ စက် ၁ က floder 1 ခုမှာ ဖိုင်က ၅ ဖိုင်ရှိတယ်ဆိုရင် စက် ၂ က ၃ ဖိုင်လောက်ပဲတွေ ့တယ် ဗျာ ... ဒါပေမဲ့ စက် ၃ ကတော့အပြည့်မြင်ရတယ်ဗျ
virus စစ်ကြည့်ပါဦး။ အဲဒါကြောင့်လဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မရဘူးဗျ။ gtalk ကလာတဲ့ chrome virus ၀င်ပြီးကတည်းက အဲလိုတွေဖြစ်ကုန်တာ။ kasper နဲ့သကတ်တာလည်းမရဘူး
အဲဒီ Folder ရဲ့ Sharing ကို ဖြုတ်ပီးပြန် Share ပီးပီလား
ှShare မပေးရသေးဘူးထင်တယ် နောက်တစ်ခုက ကွန်ပြူတာနာမည်ကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ် ကျွန်တော့်အထင်ပြောတာပါ ပြန်စစ်ကြည့်လိုက်ဥိးနော်